बधाई छ ! नेपाल आइडल सिजन-३ को बिजेता बनिन सज्जा चौलागाईं – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /News/बधाई छ ! नेपाल आइडल सिजन-३ को बिजेता बनिन सज्जा चौलागाईं
नेपाल आइडलमा अरूले गाएको सुन्दा यत्तिको त म पनि गाउन सक्छु भन्ने लाग्थ्यो उनलाई । गायक सविन राईकी फ्यान सज्जा नेपाल आइडलले आफूलाई संगीत सँग अझ नजिक बनाएको बताउँछिन् । हरेक प्रतियोगी एकसे एक भएकाले आफू नै विजेता बन्नेमा ढुक्क भने छैनन् उनी । ‘टप फाइभमा पुग्नु पनि ठूलो उपलब्धि हो’, उनले सुनाइन् ।
आगलागीमा परेर किरियापुत्री बसेका दुई दम्पतीको मृत्यु